December 19, 2017 July 28, 2018 Internet Khabar
स्वस्थ बच्चा जन्माउनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर भनेको २० देखि ३० वर्षसम्मको उमेर हो । त्यसपछि क्रमशः उमेर बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढ्दै जान्छ ।स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा ३५ वर्षसम्मका महिलाले राम्रोसँग बच्चा पाउन सक्छन् । त्यस्तै २० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले पनि बच्चा पाउँदा जोखिम हुन्छ।
ओठ फुट्नबाट बचाउने घरेलु उपाय
पिसाब रोक्नुहुन्छ ? सावधान
September 3, 2017 September 2, 2018
सपनामा मरेका मानिस देखिन्छन् ? यस्तो हुनसक्छ कारण
अमेरिकाको बोस्टनमा रहेका तामाङहरुले ६ लाख आर्थिक सहयोग गरे